Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Sheekadii Afar dumara Guurso Afar Magaalo ku kala qari.
Sheekadii Afar dumara Guurso Afar Magaalo ku kala qari.
Jun 07, 2016 ANALYSIS 0
​Sheekadani waxa ay ka dhacday dhulka Somalida meel ka mid ah, balse inaga oo ixtiramayna Dadka ay sheekadu khusayso ayaa waxa aynu wax ka badali doona Magacyadooda Rasmiga ee la yidhaahdo ,kadibna waxa aynu isticmaali doonaa magacyo cusub sida Guleed iyo Cilmi iwm.
Guleed waxa uu aha nin dhalinyaro ah oo Somali ah,waxa uu in badan ku fikiri jiray in uu guursado ,waxa maskaxdiisa marar badan kusoo noqnoqon jiray fikirka iyo falan qaaybta ku saabsan sidii uu mar uun u guursan lahaa Gabadh .
Guleed ma ahayn nin haysta wax dhaqala ah ,mana ahayn nin ka shaqeeya shaqo sidaasi usii wayn ,balse hadana waxa uu ahaa nin aanay ka madhnayn dadaal iyo hawlkarnimo , Guleed waxa uu Nolol maalmeedkiisa kala soo bixi jiray, ilalinta Goob ganacsi oo uu Waashmaan ka ahaa halkasi oo uu waxooga Lacag ah ka heli jiray .Guleed waxa uu la dhashay tiraba Afar Caruura oo isaga ka yaryar da’ahaan .
Guleed waxa uu markii danbe go’aan saday in uu raadsado Gabadhii uu Guursan lahaa,waxanu sheeka Guur la wadagay Gabadh ay sifican isu yaqanaan ,taasi oo dhib kastaba ha kasoo gaadhee ay ku gulaysteen Guri iyo Guri’galkii.
Guleed mashaa Allaa waxa ay gabadhii u dhashay caruur dhan 4 Caruura,sida aan horaba usoo sheegnay Guleed ma hayo shaqo nolol maalmeed kiisa Guriga wada kafaysa, balse hadana waxa uu ku imaan qabaa xogaga yar ee Ilahay kasoo siiyo shaqadasi Waashmaan nimada.
Inta badan lama waayo shaydaan amma Ibliis ka dhex shaqeeya dadka is jecele, Guleed waxaa kusoo kordhay in uu isfahan waa uu ka dhex dhashay isaga iyo Xaaskisii ,taasi oo ay sabab u noqotay dhinaca dhaqalaha oo aad u liita iyo Guleed uu u dulqadan kari wayay cananta kulul kaga imanaysa Xaaskisa .
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Guleed oo meel fadhiya isla markana ka fikiraya Hadalada canaanta ah ee aan ceebtu ku jirin ee kaga imanaya Xaaskiisa,ayaa waxa uu yimi nin ay saxiib yihiin oo layidhaa Cilmi .
Guleed iyo Cilmi oo laba saxiiba ah ayaa waxa dhex martay sheekadan.
Cilmi: saxiib guleed waan ku salamay ,waxa aan ku waydiiyay baryahan waxa aan ka dareemayaa in aad xooga fikirayso maxay ayaa kugu soo kordhay ii sheeg ?
Guleed: Saxiib waa runtaa baryahan waan fikirayay waxana igu soo kordhay tii (xaaskii)aanu wada joognay ayaanu heshiin la’nahay.
Cilmi: Saxiib maxay ayaa dhacay oo aydun la heshiin la’dihiin.
Guleed: Saxiib dhibta ugu wayn ee naga dhex tagani waxa ay tahay dhinaca dhaqalaha,oo aniga oo aan haynin dhaqale ku filan reerkayga,balse hadana habeen iyo maalinba u dadalaya ayaa waxa ay i leedahaya markasta waa in aad keenta Lacag iwm oo aan awoodayda ahayn.
Cilmi: Saxiib waan ku fahmay ,sheekadan oo kalana waan aqaanaa ,Gabadhan oo kalana waxa lagu sameeyo ee ay buuqa ku yaraynayso Ilahay waa i baray.
Guleed: saxiib haye ii wad sheekada ,talana isii aan Buuqan ku yareeyo Reerkuna aanu iiga burburin.
Cilmi: Saxiib waxaan ku siinayaa talo fican oo ah,waxaan kugula talin lahaa Gabadhan la Guurso!!
Guleed; yaa yaa yaa la Guursa’aaa .oo markaa maxaan soo siyadiyay ee aan ahayn Buuq labaad iyo masuliyad labaad ,caruur labaad ,xidid labaad,oo aan xanbaaro.
Cilmi: xaasha maya ,sidaas maha ,Somalidu waxa ay ku maahmahdaa Nin naagkaliya qabaa waa Nin Dab ku baxaayo,markaa si ay kaga jeedsato waxaan kugula talin lahaa la Guurso.risiqana Ilahay ayaa bixiya .
Intaasi markii la is waydaarsaday ayaa waxa ad moodaa in ninkii Guleed taladii saxiibkii ay wax kaga duxeen, kadibna markii uu xoogaa maskaxdiisa uu la shawray waxa u soo baxday in uu talada saxiibkii sideeda u qaato ,taasi oo uu u arkayay in ay tahay nasteex iyo naruuro .
Guleed: saxiib waan kula qatay waana talo fiican,hore ayaan uga maqlijiray odayasheenoo leh , hadii Gabadhu kugu kululaato waa lala guursada markasi ayay kaa dagaysaa,caqliga ha waayin hada ayaan ku dhaqaqaya sidaan gabadh kale u keeni lahaa .
Rag talo kama dhamaatee Guleed iyo Cilmi waxa ay ku kala tageen in maslaxada iyo wanaaga Reerka Guleed lagu xaliyo in Guleed uu Gabadh labaad guursado,taasi oo ay labadoduba markii ay talada rogrogeen u arkeen in uu yahay xalka kama danbaysta ah ee reerkaasi ku xasilaayo, Guleedna ay kaga yaranayso hogunka iyo hadal tirada faraha badan ee uu ka tirsanaayo xaaskiisa.
Muddo aan sidaa usii badnayn markii laga joogo wada tashigii Saxiibada Guleed iyo Cilmi ,ayaa Guleed waxa uu lasoo heshiiyay Gabadh Carmal ah(garoob) kadibna waxa uu u sheegay Gabadhaasi in aanu lahayn xaas hore iyana waa ay ka aqbashay .
Guleed madama ay shaqadiisu yahay Washmaan amma waardiye una badan tahay xiliga habeenkii ,waxa uu fursad iyo jaanis u helay in uu habeenba guri tagi karo cidina aanay ogaan, gabadh kastana ay u qabta uun in uu habeenka uu la joogo mooyane habeenka kale uu shaqaynaayo.
Guleed gabadhii danbana Ilahay caruur ayuu ka siiyay ,balse mushkiladii iyo dhibtii uu islaha waa ay ka yaranaysaa saxiibkina kula taliyay waxa ay noqotay mid kusii laban labanta.
Sida inta badan Guryaha Somalida u cadada ah ,waxaa muran soo kala dhex galay Guleed iyo xasas kisii ,murankasi oo salka ku haya dhaqala darada aadka u badan ee soo foodsaartay Guleed iyo Reerkiisa madama caruurtisuna ay hada aad u badan yihiin.
Guleed dhibta haysata maha oo kaliya mushkilada dhinaca dhaqalaha, balse waxa kaloo gaar u ah oo anay cidina la ogayn Allah moyane in uu xaas iyo caruur kale Magalo kale ku leeyahay kuna qarinayo,tasi oo iyana ku keentay culays kale oo noloshiisa ku soo biiray .
Qofkasta oo dhanka qoyska culays kaga yimaado waxaa laga gartaa dareenkiisa ,Guleed saxiibkii Cilmi waxa uu arkay Guleed oo xogaa yar jaha’wareersan isla markana ay ka muuqato murugo iyo walbahaar aad u badan ,wajigiisana laga dareemi karo in Guleed ay wax cusubi kusoo bireen.
Cilmi oo ah saxiibka Guleed markastana talada iyo tusalaha la garab taagan ayaa markii ay isu yimadeen waxaa dhex maray hadaladan:-
Cilmi: saxiib Guuled maxaa ku helay sideed tahay ayamahan ii waran maxaa soo kordhay?
Guleed: saxiib waxa igu soo kordhay ,wadigii ogaa in aan laba xaas leeyahay oo aan midba meel ku khabeeyo ,waxa kale oo aad la socotaa italkayga dhinaca dhaqalaha ,Labada xaas midna waxba kama hagrado balse hadana waxa hada soo if’baxay in Dumarkii midkastaba ay ka hadlayso in aanay ku filayn waxa yar ee aan siya madama caruurtii badatay.
Cilmi: kkkk saxiib waa aan fahmi karaa halka ay dhibatadu ka tagan tahay,odayasheeni waxa ay odhan jireen nin laba xaas lihi waa nin laba Girgire dhex taagan markaa waxa aan kugula talin lahaa si aad labada Girgire uga badbaado naag sadaxaad Guurso.
Cilmi: waxa aan ka hayaa Odaysheenii hore Ninka qaba Laba Nagood waa nin Dhari saaray Laba dhadhaar,sida runtana Laba dhadhaar dhari ma hayn karaan, markaa waxa loo bahan yahay si uu dharigu isugu dheeli tirmo in aad samayso dhardhaarkii sadaxaad oo ah in aad guursato naag sadaxaad.
Guleed: saxiib maan fahmin maxaad uga jeeda Laba dhadhaar ,sadax dhadhaar ,mida kale maxay ayuu yahay dharigu.
Cilmi: saxiib Labada dhadhaar waa labada Dumara ,waanay dhib badan yihiin ,Ninkuna waa uu ku dhex dhintaa, Sadaxda Dhadhaarna waa Ninka Qaba Sadax Dumara ,kaasi oo qalbiga iyo niyaduba ay u dagan tahay kadibna ninku waxa uu noqonayaa Dhari saaran Sadax Dhadhaar oo dhinacna u dheeliyo maayo.
Guleed waxa uu qaatay taladii saxiibkii ,waxaanu ku dhaqaqay in uu Gabadhii Sadaxad raadiyo,balse isaga iyo saxiibkii , waxa jadwalka ugu jira in gabadh kasta oo la guursanayo la qariyo laguna guursado magalo ka gadisan magalada hadba uu dagan yahay Guleed.
Guleed wakhti yar ka bacdi waxa uu soo xero galiyay Gabadh Sadaxaad oo Carmal(garoob) ah caruur horena haysata, taasi oo ku nool magaalo kale oo ka baxsan labada magaalo ee uu Guleed xasaska ku qabo , Guleed isaga oo ka fa’idaysanaya kala magalada ay yihiin gabadhan cusub ,ayaa waxa uu u sheegay in aanu lahayn wax Reera oo hore isla markana uu yahay Nin dhalinyaro ah oo Shabaaba oo hada uu Guur iyo Guri gal ugu horeeyo.
Muddo ka bacdi ,Guleed waxa dareen iyo shaki markiiba ka qaaday Xasaskii hore ee uu qabay,Guleed waxa uu noqday nin markasta walbahaan iyo warwar uu maskaxdiisa ku furan yahay,Guleed waxaa ku adkaatay dhaqistii iyo ka warhayntii Sadaxda Xaas ,Guleed waxa kaloo Ilahay mahadii Gabadhii sadaxaadna ay u dhashay caruur badan .
Guleed hada waxa uu leeyahay Sadax Xaas oo midina aan mid ogayn , waxa kaloo uu leeyahay sadax caruurood oo aan iyaguna in ay walaalo yihiin aan iska warhayn .
Guleed sida runtaa dhinaca shaqada wax badan oo la sheegi karaa uma kordhin, balse hadana waxa uu waagii baryaba ku kalahaa shaqadisii Waashmaan nimada taasi oo ah mida kaliya ee uu aqoonta u leeyahay lana qabsaday sanadaha faraha badan.
Qofkasta oo caqli lihi waa uu fahmi karaa in ay adkanayso in Reer iyo qoys lagu dhaqo iska warhayn la’aan iyo qarsoodi,balse Guleed waxa aad mooda in uu noqday nin la qabsaday qaabkan iyo ismamulkan uu ku dhaqaayo reerahiisa.
Sida runta ah inta badan Guryaha iyo reeraha marnaba lagama dhex waayo isqabsi iyo iska hor’imaatin ka dhashao danta iyo dadaalka loogu jiro nolosha qoyska.
Mudo yar ka bacdi ayaa waxaa hadana sidii la filayay usoo shaacbaxay xurguf iyo isqabsi soo wajahay Guleed iyo Reerihiisii , kasii oo badan kiisu ka imanaya dhaqala yaraanta meesha taala iyo Caruurtii oo Masha Allah aad u badan iyo waliba qarsoodigan faraha badan ee uu Guleed samaynaayo kaasi oo in badan la dagay dadaalki iyo horu markii uu Reeraha u samayn lahaa.
Guleed mushkiladaha iminka haystaa maha oo kaliya dhibaato dhanka dhaqalaha ah,balse mushkilada u badan ee haysataa waxa ay tahay iyada oo reerahii iyo caruurtii uu kala qarinayay ay noqdeen kuwi dhawaan laga filan karo in ay waawaynadaan.taasi ayaa Guleed waxa ay ku haysaa warwar wayn oo maskaxdiisa la dagay.
Guleed isaga oo ka shidaal qadanaya qabkan ay waxbadani in mudo ah ugu suura galeen in aany dhicin in ay is ogadaan dumarkuu guursaday , isla markana isticmalaya xirfada iyo aqoonta oo hada u yeeshay Guurka iyo Xeeladahiisa qarsoon ,ayaa waxa uu muddo ka bacdi soo xero galiyay Gabadhii Afraad.
Guleed gabadhan uu hada Guursaday ayaduna waxa ay dagan tahay Gobol ka gadisan kan uu Guleed ku nool yahay , waana Gabadh iyada Lafteedu soo martay Guur hore balse aan Ilahay wax Ubada amma Caruur ah.
Guleed markii uu Gabadhan Afraad guursanayay waa ay ku adkaatay in uu u sheego in uu leeyahay Sadax xaas oo kale .waxanu talo ku goostay in aanu waxba u sheegin ee uu maro jidkii uu ku wii horaba uu u sheegay.
Guleed sida aynu ka wada warhayno mahan nin haysta Dhaqale aad u farabadan oo uu ku kala kafeeyo Guryahan Afarta ah ,balse waxa ay talo iyo taagiba ay kaga idlaatay malinta ay mid kamida xasaskiisa ay ka cadhaysiisaba in uu u arko in uu cadhadaasi ku damiyo guursasho gabadh cusub.
Waxba yaan hadal idinku dalinine Guleed waxa uu Guursaday Gabadhii Afraad oo uu in muda ahba ku qarinayay Magalo ka mida Dhulka ay Somalidu dagto .
Guleed sanado ka bacdi waxa uu yeeshay Caruur gadhaysa sadax iyo sodon caruura,kaasi oo uu silic iyo saxariir kaga dhalay Dumarkii faraha badnaa.
Guleed caruurtisii waa ay waa’waynatay ,hadaba waxaa sheekada wax lala yaabo ahayd in maalin maalmaha ka mid ah isdaga oo Guleed jooga suuqa in loo soo sheegay in Inan(wiil) uu dhalay uu nabar ku dhuftay inan(gabadh)kadibna loo taxabay saldhiga Boliska,loona bahan yahay in uu Saldhiga Boliska yimaado.
Guleed waa uu cararay waxaanu tagay Saldhigii Boloska, isla Saldhigii iyaguyna waxa yimi oo markii horana wada dagana Laba Magalo oo aan aad u kala fogayn Labadii Dumar ahaa ee Caruurta is dishay dhalay.
Aqoon la’aanta meesha ka taagan isma yaqaanan laba Dumar ahi sidoo kalana isma garanayaan labada Caruur ahi,kadibna waxaa saldhiga soo galay Guleed waxana markaliya Aabo Aabo Aabo midba dhinac uu kaga yeedhiyay Caruurtiisii.
Halkasi ayaa labadii Dumar ahaa iyo dhamaan dadkii Saldhiga joogay ay afka ay gacanta sareen,kadibna Guuled waxa uu go’aan saday madama qaladkii uu galay uu maanta fashil may in ay barina dhici karto in Caruurtiisa qaar ka midii ay is Guursadaan isaga oo aan ogayn isuna sheegin.
Guleed waxa uu sameeyay in uu dhamaan Caruurtii iyo Dumarkisii oo dhan isugu yeedho kana codsado in ay wada cafiyaan isna wada bartaan.
Cilmi Saxiib, Guryaha Somalida, shaqo, talo
Beelaha aan lahay maamul u gaara goorma ayey ku biirayaan United Tribal states of Smalia?Q.2'aad. Ururka Adal Unity oo Buugaag Gaadhsiiyay Borama Public Library iyo Warbixin Ku Saabsan..
Laamaha amniga Jarmalka oo baadi-goobaya nin Tanzaniyaan ah oo loo heysto in uu...
24 Nin oo Soomaali “Samaroon” u badan ayaa lagu laayay magaalada...
Socdaalka Waftigii Suldaan Wabar oo Daarnaa Horumarinta Degmada Harowo +...
Dec 27, 2016 0
Jug soo dhacay oo caruurtisa xilal muhima uga magacabaya mamulkiisa… arin...